» सिक्का बटुलेर ११ हजारको बिजुली बिल तिर्दा भयो यस्तो हंगामा
सिक्का बटुलेर ११ हजारको बिजुली बिल तिर्दा भयो यस्तो हंगामा
६ चैत्र २०७६, बिहीबार २०:२७
आजकल विद्युतको उपभोग निकै बढेको छ । सस्तो र सुलभ रुपमा विद्युतको उपभोग गर्न पाएपछि धेरैको जीवनमा यो अपरीहार्य बनेको छ ।
तर यहि विद्युतको बिल तिर्ने बेलामा कसैले नगद वा बैंक भुक्तानको सट्टा सिक्का दियो भने के होला ? त्यो पनि ११ हजार भन्दा बढि रकमको भुक्तानी सिक्काबाट गर्न चाहेमा के होला ?
भारतको हरियाणास्थित फतेहाबादमा यस्तै एक रोचक घटना भएको छ । स्थानिय एक युवकले बिजुलीको बिल तिर्ने नाममा करीब ११ हजार रुपैयाँको सिक्का दिएका छन् ।
बिजली निगम कार्यालयमा बिल तिर्न उनले ११ हजार बराबरको सिक्का दिएका हुन् ।
यसरी युवकले बिजुली विभागको बिल तिर्न सिक्का दिएपछि निगमका कर्मचारीबिच खैलाबैला भएको थियो । उनले बिल भुक्तानीमा सिक्का दिएपछि सबै सिक्का बैंकबाट परीक्षण गराउने भन्दै तत्काल भुक्तानी लिनबाट इन्कार गरेका छन् ।
फतेहाबादका कुलदीप नामक युवाले करीब ४६ हजार भारतिय रुपैया बराबरको बिजुलीको बिल तिर्नु थियो । कुलदीपका अनुसार नियमित समयमा बिल आमाद्वारा बिल तिर्दै आएकोमा जनवरीबाट बिजुलीबो बिलमा गडबढी भई एकाएक ४६ हजारको बिल आयो ।
जसलाई उनले तत्काल उपभोक्ता कोर्टमा सुनवाईका लागी अनुरोध गरे । तर उपभोक्ता कोर्टले ४६ हजार बिलको सट्टा ११ हजार तिर्नै पर्ने फैसला दियो ।
जसका कारण आफुमाथि अन्याय भएको तर कोर्टले समेत उचित न्याय नदिएको आक्रोशमा कुलदिपले ११ हजारको सिक्काले बिल तिर्न निगम पुगेका थिए । तर निगमका अधिकारीले सिक्का लिन मनाहि गरेको भन्दै कुलदीपले फेरी अदालतको ढोका ढक्ढकाउने बताएका छन् । स्रोतः जीन्यूज